ग्याष्ट्रिक तथा कोल’स्ट्रोल भएका बिरा’मीका लागि गुन्द्रुक खानुका यति धेरै फाइदाहरु ! – Yuwa Aawaj
असार ९, २०७८ बुधबार 277
Prevको-भिडको तेस्रो लहर नआउने कतारको दावी ।
Nextघरबेटीलाई झुटो आ’रोप लगाउने रुपामाथि कारबा’हीको माग ।
गायक दुर्गेश थापाले आफ्नो पारिश्रमिक आ’गलागी पी’डितलाई खर्चिए ।
सुत्नु अघि खानुहोस् २ वटा ल्वाङ, मिल्नेछन् यति धेरै नसोचेका चमत्कारिक फाइदाहरु !
भ्वाइस अफ नेपालमा नयाँ कोच, दीप श्रेष्ठ अस्वस्थ भएपछि राजेशपायल राईले सम्हाले कार्यभार ।